Gacaliye Twitter, Fadlan Jooji Waalida Soo Socota | Martech Zone
Gacaliye Twitter, Fadlan Jooji Waalida Soo Socota
Khamiis, May 7, 2009 Axad, Agoosto 23, 2009 Douglas Karr
Maalin kasta waxaan fiiro gaar ah u siiyaa waxa igu socda Twitter. Mid kasta iyo xubin kasta oo i raacda waxay ula jeedday wax. Waxaan ku soo raacay raacitaankeyga si dabiici ah, anigoo ku kasbanaya mid raacsan markiiba.
Mar dambe maahan. Hada waa wax lagu qoslo… auto-raac hirarka waxaa lagu fulinayaa daqiiqad daqiiqad. Waxaan tagi lahaa Twitter-ka maanta oo waxaan heli karaa dhowr boqol oo khiyaanooyin ah oo kaa kicin doona in ka badan 10,000 taageerayaal maalmo gudahood. Twitter waa inuu ku dhex adkaadaa culeyska aan caadiga ahayn ee lambarradan.
Ma garanayo waxa ku qasbaya qof inuu tiro khiyaameeyo tirooyinka si uu u helo kubbado indhaha ka madhan. Noocee noocee ah ayaad u baahan tahay inaad ku socoto wadadaas? Ma hubo laakiin runtii way iga careysiisaa. 5,000 oo raacayaalkay macno ayey sameyn jireen Haatan waxaan ka fiicanahay 6,000… laakiin qaar badan oo ka mid ah kuwa raacsan cusub ayaa si toos ah u raacaya codad.
Nidaamyadan otomaatig-raacku waa inay ku shaqeynayaan bannaanka Twitter-ka, sidaa darteed waa inay fududaan tahay in la aqoonsado oo la xannibo Twitter waa inuu hadda sameeyaa - maaha oo kaliya inuu ka takhaluso culeyska ficil-celinta ee soo socda, laakiin si loo yareeyo culeyska ay tahay in dhammaan taageerayaashan ay sameynayaan inay saameyn ku yeeshaan waxqabadka Twitter ee inteena kale ee qadarinaya adeeggooda.
Fadlan Twitter… wax ka samee! Way baabiinayaan dalabkaaga.
May 8, 2009 at 12: 29 AM
Waxaan u isticmaali jiray si toos ah u raaco markii ugu horeysay ee aan bilaabay ka dibna waxaan ogaaday noocyada dadka aan ansixinayo inaysan ahayn cidda aan rabo inaan raaco. Hadda waxaan soo xushay oo aan mid mid u dooranayaa. Haatan waxaan kuu raacayaa sidii aan u hubiyey oo aanan horey u sii ahaan jirin.
May 8, 2009 at 12: 32 AM
Runtii codsi ayaan u galiyay barta Twitter-ka si aan uga saaro meesha aan ku socdo ee otomaatigga ah laakiin wali ma aanan maqlin dib ... Waxaan rajeynayaa inay ikhtiyaar ku daraan sidaa darteed aniga ayaa si fudud nafteyda u damin kara. Hadda waan ka qoomameynayaa Michael!
Waxaan mid kasta hubinayaa oo aan dabagalayaa markaan arko inay si fudud u yihiin spammer ama cod-raac otomaatig ah (waxay ka kici doonaan dhowr taageerayaal ilaa kumanaan usbuuc).
May 8, 2009 at 8: 36 AM
twitter wuxuu ku jiraa xukunka adduunka hada. qofkasta oo xafiiskeyga ka mid ah marwalba wuu fooraraa. ma aanan sameyn auto-raac
May 8, 2009 at 9: 07 AM
Sidee u qosol badan tahay in xayeysiinta banner ee dusha sare ee boostadan loogu talagalay adeeg kaa heli doona 4,000 oo raacsan $ 12.95.
Majiraa? Mahadsanid Google!
May 8, 2009 at 5: 35 PM
Taasi waa dhawaaqa Doug oo qaylinaya ee aad maqashay! Doh!
May 8, 2009 at 10: 27 AM
Waxay umuuqataa markasta oo aan kudarsado fariin twitterka waxaan kudhamaystaa ilaa shan taageerayaal cusub?
May 8, 2009 at 10: 38 AM
Waan kucusubnahay twitterka laakiin waan arki karaa dhibaatada iyo fowdada ay taasi sababi doonto. Caawinaad helitaanka taageerada ololahayga si dadka loogu arko iftiinka oo ay u joojiyaan isticmaalka gawaarida gawaarida, qoraallada iyo adeegyada.
May 8, 2009 at 5: 38 PM
May 8, 2009 at 4: 03 PM
Noloshu aad ayey u gaaban tahay in lagu mashquuliyo dadka aan isla wadaagin danahaaga do Waxaan dareemayaa in xiriirada ay ahaadaan sida dhalada Khamriga “Wanaagsan” waa inaad doorataa oo aad go'aamisaa waxa ugu fiican ee dhadhankaaga!
May 9, 2009 at 1: 31 AM
OMG. Waad ku mahadsantahay qoraalkaan. Waxaan xiriir jacayl / naceyb la leeyahay Twitterka sababtaas darteed. Shalay uun, waan curyaamiyey ogeysiisyada maxaa yeelay waxaan si fudud u luminayey waqti aad u badan oo aan ku shaqeynayay taageerayaal cusub (faaruq ah) maalinba maalinta ka dambaysa (iyo xitaa xitaa uma haysto meel u dhow tirada badan ee kuwa raacsan sida qaarkood).
May 21, 2009 at 10: 35 PM
Waxaan u maleynayay inay tani isbeddel adiga kuu tahay. Waxaan xasuustaa inaad dhahday adigu waad toos u raacday qofkasta oo ku raacay iyo inaad danaynaysay mid kasta iyo mid kasta oo ka mid ah kuwa raacsan. Ma isweydiisay waxa dhaliyay isbaddalka guud ahaan aragtidaada ku aaddan istiraatiijiyaddan? Ma waxay ahayd kaliya kuwa wax basaasa?
Apr 6, 2011 at 1: 09 AM
Waan oggolahay, waxaan u maleynayaa in qalabka otomaatigga ah ee soo socda uusan u abuurin wax qiimo dhab ah kuwa raacsan iyo kuwa followees. Waan ka xumahay inaan arko qoraalkan wuxuu ku dhow yahay 2 sano.